TTSweet: အန်တီဆွိနှင့် ကားရောင်းခြင်းအတွေ့အကြုံ (၁)
Posted by T T Sweet at 1:40 PM
NILAR May 14, 2011 at 10:29 PM
hi..sis i m looking forward the rest.It's interested. U are good in writing!!!!
ဖိုးတုတ် May 15, 2011 at 1:00 AM
ပို.စ်ကိုကောင်းတယ်လို.ပြောမှလည်း ဘလော့ဂါက ရေးအားရှိတာပေါ့နော်၊
အရေးအသားက တကယ်ကောင်းပါတယ်၊ ဆရာမ လုပ်ခဲ့လို.လား မသိဖူး၊ စာပိုဒ်က ခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ.
red hill ကား ပွဲစားတန်းအကြောင်းရေးတာ တခန်းရပ်ပြဇတ်အတိုင်းပဲ
စင်ကာပူကိုအလည်တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီး chicken rice လာစားပါလား၊
T T Sweet May 15, 2011 at 4:25 AM
ကိုဇက်၊ နီလာနဲ့ အနောနိမတ်စ် အားပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်။
Chicken rice ကတော့ ရယ်ဒီမိတ် အနှစ်ထုတ်လေးတွေ ၀ယ်သွားတာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကတောင် လုပ်စားသေးတယ်။ တော်တော်တူပါတယ်။ အိမ်မှာ ဂျူဂျူက သိပ်ကြိုက်တာဗျ။ ဒီမှာလဲ အဲလိုရယ်ဒီမိတ် အထုတ်တွေ ၀ယ်လို့ရတော့ တော်သေးတယ်။